कहाँ छन् हाम्रा आफन्त ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १३, २०७६ गीता रसाइली
नगमालाई सानै हुँदा हजुरआमाले हात समात्दै धेरैतिर लगेको याद छ । उनकी बहिनी स्वस्तिमा चाहिँ हजुरआमाको काँधमा हुन्थिन् । त्यस्ता प्रायः ठाउँमा नगमा उहाँकै उमेर समूहका महिला बढी देख्थिन् । बिस्तारै नगमा ती परिचित भीडहरूमा हजुरआमाको हात फुत्काएर खेल्न र रमाउन छोडी माइकमा आफन्त हराएकाहरूको बोली सुनेर टोलाउन थाल्ने भइन् ।
हजुरआमा त्यसरी आफूहरूलाई लिएर भौंतारिएको कारण नगमाले अलि हुर्केपछि मात्रै बुझ्न सकिन् । उहाँ आफ्ना बेपत्ता छोराको, नगमाहरूका बाबाको खोजीमा हिँड्नुहुँदो रहेछ । अहिले बाइस वर्ष टेकेकी नगमा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको दिन हरेक अगस्ट ३० मा आफ्ना बाबाको सम्झनामा मैनबत्ती बाल्ने गर्छिन् ।
मनमनै चिच्याउंँछिन्, ‘बाबा, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ?’ बाहिर जति कराए पनि केही नहुने रहेछ भन्ने उनले बुझिसकेकी छन् । नयाँ नेपाल उनको मौनता चाहन्छ भन्ने पनि उनले बोध गरिसकेकी छन् । उनलाई ख्याल भइसकेको छ— उनको मौनताले यो देशमा शान्ति र अमनचैन कायम राख्छ !
२०६१ सालमा मूर्तिको काम गर्न भनी ललितपुरको ठेचोबाट काठमाडौंको ताहाचल गएका नगमाका बाबा त्यसपछि फर्कन पाएनन् । हजुरआमा स्वास्थ्यका कारण हिँड्नै नसक्ने भएदेखि उनैले खोजी अभियान चलाइरहेकी छन् । अहिले त हजुरआमाको पनि देहावसान भइसकेको छ । सानी छोरीको जन्मसँगै पत्नीको मृत्यु भएपछि बाबाले नै दुई छोरीलाई हुर्काइरहेका थिए । बाबा बेपत्ता पारिएपछि हजुरआमाले उनीहरूको पालनपोषणको जिम्मा लिएकी थिइन् ।
बित्नु अघिल्लो रात हजुरआमाले नगमासँग रुँदै भनेकी थिइन्, ‘एक पटक तिम्रो बाबालाई भेट्न पाए कस्तो हुन्थ्यो ! ऊ यो संसारमा छैन भने पनि उसको काजकिरिया गरेर मात्र मर्न पाए हुन्थ्यो !’
हजुरआमाको इच्छा पूरा हुन सकेन । हजुरआमा नरहे पनि त्यो चाहना आफूले पूरा गर्नुपर्छ भनेर नगमा दिनरात सोचमग्न हुने गर्छिन् । त्यो दिशामा उनी लागिरहेकी पनि छन्, तर यो राज्य जवाफविहीन मुद्रामा नगमाकी हजुरआमाको झैं धेरैको मृत्यु कुरेर बसेको छ । हैन भने, हजारौं पटक रटिएको शान्ति सम्झौतामा भनिएझैं उनका बाबाझैं सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बनाइएकाहरूको स्थिति त त्यो सम्झौताको साठी दिनभित्रै सार्वजनिक हुनुपर्ने हो !
उनकी हजुरआमाको छोराको सास या लास पाउने इच्छा पूरा गर्न नसक्ने सरकारले दुई टुहुरा बालिकाको गाँस–बास–कपासबारे सोच्नुपर्ने हैन ? तर राज्यलाई यस्तो फुर्सद कहाँ ! नगमा र उनकी बहिनीको जीवनमा अब न ज्यामी काम गरेर घर–व्यवहार धान्ने हजुरबुबाको साथ छ, न सुकुल बुनेर घरखर्च चलाउने हजुरआमाकै हात बाँकी छन् । हजुरआमालाई सघाउँदासघाउँदै टोपी बुन्न नसिकेकी भए, छरछिमेकका बालबालिकालाई ट्युसन पढाउन नथालेकी भए नगमाले सानै उमेरमा बहिनीको बिँडो थाम्न कसरी सक्थिन् होला ? एक्लैले बहिनीलाई कसरी हुर्काउँथिन् होला ?
द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिनका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी दुई आयोग गठन हुँदै छन् भन्ने समाचार सुन्दा नगमा कति खुसीथिइन् ! मक्ख पर्दै उनले हजुरआमासँग भनेकी थिइन्, ‘अब त हाम्रो बाबा आउनुहुन्छ होला, हगि आमा ?’ तर हजुरआमाहरूको न्यायका लागि यी आयोग जसरी बन्नुपर्ने हो, त्यसरी बनेनन् ।
नगमालाई थाहा थिएन, हजुरआमाहरू आयोगलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र स्वार्थसिद्धिको संयन्त्र बनाउने षड्यन्त्र भएको बहस गरिरहनुभएको रहेछ । उहाँहरूले त आयोग बन्नुअघि नै, बेपत्ता पार्ने जस्तो गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नहुने कानुनको सुनिश्चितताको माग पो गरिरहनुभएको रहेछ । नगमाले त यो सब बुझ्नै सकेकी रहिनछिन् । अचेल उनलाई लाग्छ— कतिपय पीडितले यस्ता कुरा बुझेकै छैनौं । आयोगका नाममा राज्यले पुनः पीडित बनाउँदै लाने र बच्चालाई मिठाई देखाएझैं भुलाइरहने, पटक–पटक म्याद थपेर वर्षौं झुलाइरहने, असंख्य निवेदन बटुल्यौं भनेर एउटा तथ्यांक दिएपछि हामी मक्ख परिरहने !
राज्यलाई त स्मरण होला नै, आयोगमार्फत पीडितहरूलाई प्राविधिक रूपमा बुझ्न कठिन हुने प्रश्नको थुप्रोसहितको कागज थमाई विगतमा द्वन्द्वमा संलग्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रहेको शान्ति समितिजस्तो पूर्वाग्रही निकायमार्फत भराएर प्राप्त भएका हुन् ती तथ्यांकहरू ।
नगमालाई नै बेपत्तासम्बद्ध फारम भर्न घण्टौं लागेको थियो । कति प्रश्न उनले बुझ्नै सकेकी थिइनन् । परिचित बेपत्ता परिवारकी आमालाई फोनमा यसबारे सोध्दा जवाफ पाएकी थिइन्, ‘शान्ति समितिले भरिदियो ।’ त्यस्तै अर्को परिवारकी दिदीलाई सम्पर्क गर्दा सुनिन्, ‘जो पीडक हो भनेर फारममा लेखेकी छु, उसकै दलको संयोजक शान्ति समितिमा छ । त्यसैले म त फारम बुझाउन डराएकी छु ।’ नगमाले जे फारममा भरिन्, त्यो डर र अविश्वासको सम्मिश्रणबाहेक केही थिएन । त्यति फारम भरेपछि आयोगको समयावधि नसकिएसम्म उनलाई आयोगले सम्पर्क गरेको कुनै सम्झना छैन ।
हजुरआमाले नगमालाई एक दिन उनका बाबालाई खोज्न आफू भैरवनाथ गण पुगेको प्रसंग सुनाउनुभएको थियो । उहाँ रोइकराइ गरेपछि सेनाले ठूलो फाइल ल्याएर ‘यसमा आफ्नो छोराको नाम खोज, यहाँ नाम छ भने तिम्रो छोरा यहीं छ, नत्र यहाँ छैन’ भनेको रहेछ । दुर्भाग्यवश, हजुरआमालाई पढ्न आउँदैनथ्यो ।
हजुरआमा भोलिपल्ट पढ्न जान्ने मान्छे लिएर जाँदा हिजो फाइल देखाउने ड्युटी अफिसर रहेनछन् र अर्काले ‘मलाई थाहा छैन’ भनेर पठाइदिएछन् । नगमाले यो पंक्तिकारलाई सुनाइन्, ‘त्यो दिन हजुरआमाले हामीसंँग कुरा गर्दा पछ्यौराले आँखा मिच्दै भन्नुभएको थियो— मलाई पढ्न आएको भए तिमीहरूको बाबा त्यहाँ थियो कि थिएन थाहा हुन्थ्यो, त्यहाँ थियो भने सायद मैले फर्काउन सक्थेँ कि ? अरू को–को थिए भन्ने पनि थाहा हुन्थ्यो होला ।’
आयोगले यी र यस्ता कथाहरूको यत्रो वर्षसम्म दस्तावेजीकरण त गर्न सकेन, न्याय त कताकता ! नगमा सोध्छिन्, ‘दिदी, बेपत्ता आयोग फेरि बन्दै छ रे । पहिलेका आयुक्तहरूले अति उत्कृष्ट प्रदर्शनी गरेकोले उनीहरूलाई नै पुनः नियुक्त गर्दै छन् रे, हो ?’ यो प्रश्न पंक्तिकारलाई भए पनि राज्यलाई हो । हामीलाई राजनीतिक षड्यन्त्रले भरिपूर्ण जवाफ होइन, हाम्रो घाउमा मल्हम लगाउने विश्वास चाहिएको छ ।
आज अगस्ट ३० । संसारभरका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफन्त खोजी गर्दै दीप प्रज्वलन गर्ने दिन । संयोगले आज नेपाली पात्रो अनुसार बुबाको मुख हेर्ने दिन पनि । बहिनीले नगमालाई एक दिन भनेकी थिइन्, ‘मेरो स्कुलमा सबै साथीले बुबाको मुख हेर्ने दिन बाबाको लागि कार्ड बनाउँछन्, म के गरूँं ?’ नगमाले भनेकी थिइन्, ‘तिमी पनि कार्ड बनाऊ । बाबा आउनुहुन्छ अनि दिऔंला ।’ अनि बहिनीले प्रत्येक वर्ष बाबाका लागि भनेर बनाएका सुन्दर कार्डहरू भित्तामा टाँस्न थालिन् । कार्डहरूले त्यो भित्ता भरियो, तर बाबा आउनुभएन ।
यो वर्ष पनि उनको उपहार भित्तामा मात्र सजिनेछ ।
लेखक द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष हुन् । प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०३
मेरी दिदी मेरो प्रेरणा
वैशाख १८, २०७६ गीता रसाइली
प्यारी रिना दिदी,तिमीमाथिको अत्याचारको घाउमा खाटा बस्न पाएको छैन, तर तिनलाई कोट्याउनेहरूको घुइँचोसंँग जुध्दाजुध्दै डेढ दशक बितिसकेको छ । त्यो दिन तिम्रो सामुहिक बलात्कार भयो । त्यतिले नपुगेर छातीमा गोली हानियो । तिम्रो अस्तित्व समाप्त हुन त एकरातै काफी भयो, हजारौं दिनरात बित्दा पनि दोषीहरूमाथि कारबाही हुनसकेको छैन ।
जुन व्यवस्था ल्याउने नाममा तिमी लगायत हजारौं निर्दोषको ज्यान लिइयो, आज त्यही व्यवस्थामा हाम्रो आवाजलाई दबाइँदैछ । न्यायलाई सम्बोधन गर्ने नाममा घिनलाग्दा अराजनीतिक खेलहरू रचिँंदैछन् । ती खेलका रचनाकारहरू एउटै भए पनि कलाकारहरू भने बारम्बार फेरिँदैछन् । कहिले चिनेझैं लाग्ने त कहिले नचिनेझैं !
दिदी, त्यो दिन मेरो मानसपटलमा जहिल्यै ताजा छ । माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउन हाम्रो गाउँ सिंगारेका थिए । दिनभरि नारा लागेको थियो— 'जनयुद्ध जिन्दावाद !' साँझको झिलिमिलीले गाउँ हेर्नलायक बनेको थियो । हजुरआमा भेट्न देवी (सुनुवार) दिदी आएकीले हामी खुबै रमाउँदै सुतेका थियौं । मस्त निद्रामा भएका बेला मध्यरातमा कसैले ढोका ढकढक्यायो । ढोका खोल्न बुबा तल र्झन नपाउँदै ढोका फोरेर सशस्त्र शाही सैनिकहरू घरभित्र आँधी-बेहरी जस्तैगरी छिरे ।
उनीहरू सिधै तिमी भएको कोठामा गए, अनि 'यही हो रिना' भन्दै तिमीलाई लछार-पछार गर्दै बाहिर ल्याए । तिमीलाई बाँध्न उनीहरूले बुबासँग डोरी मागे । (बुबाका ती लाचार हातहरू अझै पनि कामिरहन्छन् !) लछार-पछार गर्दा निस्केको तिम्रो चित्कार सुन्नु बाहेक हामीले केही गर्न सकेनौं ।
सैनिकहरूले तिमीलाई लगे, हामी रातभर कोकोहोलो गर्दै जागै बस्यौं । बिहान पाँच बजे घरछेउमै गोली चल्यो । त्यो सुन्ने बित्तिकै आमा बेहोश भई ढलिन् । घर पछाडि उत्तिसको रुखमा बाँधिएको, आधा शरीर ढलेको, लुगा च्यातिएको, यौनांगबाट रगत बगिरहेको, पछाडिबाट हानेको गोली छातीबाट निस्किएको अवस्थामा तिम्रो शरीर देख्ने कल्पना हामी कसैले गरेका थिएनौं । देवी दिदी गएर तिम्रो मृत शरीरलाई तन्नाले छोपिदिइन् । तिमी गयौ, एउटा प्रश्न लिएर, जसको जवाफ पाउने झिनो आशामा हामी आजसम्म लडिरहेकै छौं ।
त्यो दिन तल्लो गाउँकी हाम्री साथी सुभद्रा चौलागाईंको पनि गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उनकी आमाले पनि शाही सैनिकहरूका हातबाट छोरीलाई खोस्न सकिनन् । उनका बुबालाई मरणासन्न हुनेगरी पिटेर छोडेका थिए । सुभद्राकी आमासँग पनि छोरीको मृत र श्रीमानको जिउँदो लासलाई छुँदै रुनुको विकल्प थिएन । उनले पनि आजसम्म चित्त बुझाउने अर्को उपाय भेट्नसकेकी छैनन् ।
दिदी, दोषीलाई कारबाहीको माग गदर्ैै राखिएको थियो, तिम्रो शव । छैटौं दिन काठमाडौंबाट पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी गएर रिपोर्टिङ गरेपछि मात्र अन्त्येष्टि गरिएको थियो । तिम्रो मृत शरीरका तस्बीरहरूले हरेक नेपालीको मनमा न्यायको लहर उब्जाउन सक्ने राजनीतिक परिस्थिति त त्यतिखेर थिएन, तर एउटा तस्बीरमा बाँकी रहेको तिम्रो एउटा तिघ्राको भाग पाँचौं दिन स्यालले लुछेर लग्यो ।
मानौं त्यो तस्बीर प्रकाशन त्यसका लागि भोजको निमन्त्रण थियो । मानव मखुन्डोधारी जनावरहरूले तिम्रो जिउँदो शरीर र अर्कोेले मृत शरीरमा राज गरे । हतियार अनि मतियारका माझ निरीह तिम्रो शरीरमाथि गरिएको खेलवाडलाई आज राज्यले खटाएका ती कलाकारले युद्ध अपराध होइन भन्दा वा त्यस्तो भन्ने षड्यन्त्र रच्दा हतियार बिनाका अर्का मतियार भेटेझैं मेरो मन छियाछिया हुन्छ ।
माओवादीले दिनभर जनयुद्ध मनाउँदा केही गर्न नसक्ने शाही सैनिकहरूले त्यसको रिस फेर्न रात-विरात जनताका घर-घरमा छिरी निर्दोष महिला र बालिकालाई यातना दिँदै बलात्कार गर्नु कहाँसम्म न्यायोचित थियो ? त्यही दिन विद्यार्थी टासी लामा र विक्रम लामा लगायतको हत्या भएको थियो । तिम्रो घटनाको साक्षी देवी दिदीले सार्वजनिक रूपमा 'हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ' भनेको समाचार आएपछि उनकी छोरी मैना बेपत्ताको सूचीमा रहिन् ।
त्यसको दुई वर्षपछि शान्ति सेनामा जानेलाई सैनिकहरूलाई तालिम दिने पाँचखाल ब्यारेकबाट मैनाको हाडखोर उत्खनन गरिएको व्यथा सारा विश्वलाई थाहा भइसकेको छ । तिमीलाई न्याय दिलाउन हिँडेकी हाम्री दिदी देवीले आफ्नै छोरी पनि गुमाउनुपर्‍यो । मैनाको हाडखोर न्याय पाउने आशामा अझै महाराजगन्जको शिक्षण अस्पतालको कुनै डिपि|mजमा चिसिइरहेको छ । त्यसले आगोको तातो खोजिरहेको छ । यस खेलका रचनाकार र कलाकारहरूले त्यो हाडखोर सम्भिmई लाज मान्नुपर्ने होइन र ? मैनाको चिसो हाडखोरले तिनको मन पोल्दैन ?
दिदी, यी सबै हत्या सुनियोजित थिए । तर प्रायः निकायले यसबारे सत्य-तथ्य बाहिर ल्याइदिएनन् । द्वन्द्वकालको अपराधलाई लिएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए । हामी पीडितहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन भएपछि मात्र आयोग गठन हुनुपर्छ भनी विरोधमा उत्रियौं ।
हाम्रो मागको बेवास्ता भयो । २०७१ माघ २६ मा नियुक्ति पाएका आयुक्तहरूले चार वर्षभन्दा बढी जागिर खाए, तर तिनले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याइदिएनन् । तिनले नालायकीपन नदेखाएका भए तिमीलाई म कम्तीमा सपनामा त खोजिरहन्नथेँ होला !
राज्यले 'गोरु अगाडि कि गाडा ?' भन्ने पाठ सिक्न नचाहँदा हामीले फेरि नयाँ अराजनीतिक खेलको सिकार हुने लगभग पक्का भएको छ । उपर्युक्त आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने र नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
कानुन संशोधन नभए आयोगहरूको पुनर्गठनका लागि सिफारिस समितिमार्फत फेरि पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवार आयुक्तहरू नआउने सुनिश्चित छ । न्यायका लागि हामीलाई साथ, आँट र हिम्मत दिनेहरूको ठूलो आवश्यकता छ । दुर्भाग्यवश, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितलाई धेरैले आफ्नो सरोकार, स्वार्थ र राजनीतिक अवसरका लागि ढालका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहने भए ।
दिदी, नेपालमा द्वन्द्वरत सबै पक्षको जित भयो (शान्ति सम्झौता भयो), त्यसैले पीडितहरूले हार्नुपर्छ रे ! त्यही हो रे शान्तिको मूलमन्त्र ! अनि तिमी फेरि रुन्चे अनुहार लगाउँदै सपनामा आई भन्छ्यौ, 'बहिनी, म त दलित अनि महिला । मेरा झन् लुगाहरू पनि च्यातिदिएका, के योे मन्त्रमा म अटाउँला र ?' म जवाफविहीन हुन्छु, किनकि शान्तिको कुन मन्त्र पढ्ने भनी उनीहरूले तिम्रै बहिनीहरू जस्ताको सुझाव कहिले मागे र ?
हाम्री आमाले 'मेरी छोरीलाई किन बलात्कार गरी हत्या गरियो ?' भनी सोध्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया खलबलिन्छ रे ! 'यस्तो काम गर्नर् कसले निर्देशन दिएको थियो ?' भनेर सोध्दा सेनाको संरचना नै बिगि्रन्छ रे ! देवी दिदीले 'मैनाको हत्यारालाई सजाय देऊ' भनी अदालतको ढोका ढकढकाउँदा 'दोहोरो खतराको सिद्धान्त' देखियो रे !
न्यायको सामान्य सिद्धान्त त पीडितले न्याय पाउनुपर्ने होइन र ? संस्थागत दण्डहीनता किन ? दिदी, हामीलाई द्वन्द्वको पीडितमात्र होइन, दण्डहीनताको पीडित भनी समस्त नेपाली जनताले, समस्त मानव अधिकार आन्दोलनले किन साथ नदिएका होलान् ? हामीले कोसँग न्याय माग्नु ? आमाबुबालाई कसरी सम्झाउनु ?
लेखक द्वन्द्वपीडित राष्ट्रियसञ्जालकी अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७६ ०९:०८
‘डिपार्टमेन्ट स्टोर’ : कोरोना भाइरस संक्रमणको मुख्य थलो
सुरेश कर्ण चैत्र १६, २०७६
नेपालमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको ठ्याक्कै दुई महिनापछि २४ मार्च २०२० मा फेरि देखियो ।